Gaming Archives - Real Gaming Myanmar
Some tips about MMR Reset
March 9, 2022 March 9, 2022 by Real Man
English Version Below MMR Reset အကြောင်း သိကောင်းစရာအချို့ MMR ဆိုတာက Dota2ကိုအတိုင်းအတာ ၁ ခုလောက်အထိတန်ဖိုးထားတဲ့သူတိုင်းအတွက် အရေးပါအရာရောက်တဲ့အရာ ၁ ခုပါ။ (ကျွန်တော်ဆို MMR ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလို့ပါခံယူထားသူပါ) ဘာလို့လည်းဆိုတော့ MMR ပေါ်မူတည်ပြီး Dota
Purge’s Advice to Herald Player to Improve MMR
March 3, 2022 March 3, 2022 by Real Man
English Version Below Herald တစ်ယောက်ကိုပေးခဲ့တဲ့ Purge ရဲ့ MMR တက်ရေးအကြံပေးစကားများ Kevin “Purge” Godec ဆိုတာက အကောင်းဆုံး Dota2Personality တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်သလို Dota2ကို အခုမှစကစားမယ့် Player တွေအတွက် အကောင်းဆုံး
5 Secrets to Gain MMR
February 28, 2022 February 28, 2022 by Real Man
English Version Below MMR တက်ဖို့အတွက် အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်(၅)ချက် Dota2မှာ MMR တက်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Cancer တွေ၊ Noob တွေအပြင် မြန်မာနိင်ငံမှာကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက် မီးပြတ်မှာတွေ၊ လိုင်းကျမှာတွေပါ တွေးပြီးတော့ ပူနေရပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုးရန်သူမျိုး(၅)ပါးအပြင် အခြားအချက်တွေကြောင့်လည်း
Gaming Knowledge News
7.31 Change Log: Heroes
February 26, 2022 February 26, 2022 by Real Man
7.31 Change Log: Heroes (၁) ANTI-MAGE Base Strength reduced from 23 to 21 MANA BREAKNow can stack with Diffusal Blade’s mana burnNow additionally slows enemy
7.31 Update Change Log: Items
February 25, 2022 February 25, 2022 by Real Man
7.31 Update Change Log: Items 7.31 မှာတော့ Item အသစ် ၃ ခုပါဝင်လာသလို ရှိပြီးသားတွေထဲက Item ၄ ခုကိုလည်း အကြီးစား Reworked လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Item အသစ်တွေအကြောင်းကို အရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ (၁) REVENANT’S BROOCH Requires
7.31 Change Log: General
February 24, 2022 February 24, 2022 by Real Man
7.31 Change Log: General ၁။ အရင်ဆုံးတိုးပေးထားတာကတော့ Hero Gold ပါ။ အရမ်းရှုပ်တဲ့တွက်ချက်နည်းတွေကို ကြည့်မနေနဲ့တော့။ အရင်ကထက် Base Gold5တိုးပေးထားတယ်။ Level ပေါ်မူတည်ပြီးရတဲ့ဟာကတော့ တူတူပါပဲ။ ၂။ အခုဆို အရင်က CD Reduction တွေမ
Those Who Were being Abused by Smurf Should Get Their MMR Back ???
February 23, 2022 February 23, 2022 by Real Man
English Version Below Smurf လက်ချက်မိသွားတဲ့သူတွေ MMR ပြန်ရသင့်လား ??? Dota2ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်လောက်အတွင်း Smurfing(Account Buying) နဲ့ Cheating ကိစ္စတွေကို တော်တော်လေးကိုင်တွယ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Valve ရဲ့တခြားနာမည်ကြီး Esports Game
The most popular shards in the DPC Winter Tour
January 31, 2022 January 31, 2022 by Real Man
အောက်မှာမြန်မာလိုပါတယ်နော် The most popular shards in the DPC Winter Tour Aghanim’s Shard has been in Dota2for aboutayear. Shads are arguably the
Topson, who climbed from the bottom to the top in 2018
January 24, 2022 January 25, 2022 by Real Man
အောက်မှာမြန်မာလိုပါတယ်နော် Topson, who climbed from the bottom to the top in 2018 One of the biggest stories of 2018 is OG, the unimpressive TI8 champion.
ddz’s Apology Letter for Matchfixing
January 14, 2022 January 21, 2022 by Real Man
အောက်မှာမြန်မာလိုပါတယ်နော် ddz’s Apology Letter for Matchfixing ddz was very popular with Arrow Gaming and was named one of the best mid-players in the SEA around